Dood: cabudhinka liita - fayras sii wada inuu wax ka cuno fikirka negro "Xaqiiqada ah in qofku u kala saaro xaqqa iyo khaldan wuxuu cadeeyaa inuu ka sarreeyo caqli kasta oo kale, laakiin xaqiiqda inuu khaldami karo wuxuu caddeeyaa in maskaxdiisa ay liidato "
Posted By: KongoLisolowaa: Sebtember 28, 2019 00: 20 No Comments
Dhismaha xagjirnimada waa wejiga dhabta ah ee masiibada Madowga / Afrika ... Run mise been?
Iskuulka, Ameerika waxay bartaa taariikhdeeda, waxay leedahay tixraacyo, waxay baranaysaa inay tahay tan ugu wanaagsan, waxay barataa in xorriyadda ay tahay midhaha allabarigii awoowayaasheen. Maskaxda, wuxuu noqdaa mid aad u xoog badan oo diyaar u ah inuu dunida ku guuleysto.
Iskuulka, Faransiiska Waxay baranayaan in xorriyadiisa ay tahay natiijada guushii ay ka gaareen awowayaashiis adduunka. Guul darrooyinka awoowayaashiisa si xikmad leh ayaa loo qiimeeyaa. Waxa kale oo uu ku bartay, isaga oo u maraya qoraallada cunsuriyadda iyo shaqooyinka (oo si rasmi ah ugu qalma sida madadaalo), in dayacayaashu ay yihiin kuwa wax badbaadiya, kuwa dadka wada cunaya. Sabab la'aan la'aanteed iyo inay ugu dambeyntii mudan yihiin in laga faa'ideysto iyo khaladaadkaas ay afrikaani yihiin hantidooda.
Ugu dambeyntiina, wuu sii xoogaystaa, wuxuu bartay inuu ku kalsoonaado isaga oo diyaar u ah inuu sii wado shaqadii awowayaashiis. (xukun)
Iskuulka, afrikaanka wuxuu bartaa in awowayaashiis ay ka iibin jireen walaalahooda tubaakada, junk, muraayadaha, khamriga. Wuxuu bartay in awowayaashiisa gumeysi tegey ay u xoreeyaan gumaysiiyayaashooda iyaga oo aan xoraynaynin. Waxa kale oo uu bartay in awowayaashiis oo dhan, kuwaas oo doonayay inay iska caabbiyaan, ugu dambeyn la dilo. Waxaa lagula taliyaa inuu naftiisa ku khafiifiyo ilaaliyeyaasha carruuta uur-jiifka ah oo aan lahayn dareen xoog leh oo loo soo bandhigay inay yihiin wakiilka keliya ee Rabbiga.
Markii aan joogay Cm2 Waxaa la ii sheegay in awoowayaashay ay ku noolaayeen godad kahor imaatinka reer yurub iyo in dalkeygu xornimo qaatay 1960, laakiin xaqiiqda maalin walba waxay i tuseysaa in dalkeygu wali ku hoos jiro xukun lacageed, dhaqan iyo maskaxeed.
Haddii kale shaqadii awowayaashay waa illoobeen, laakiin waa la xaday oo waxaa lagu muujiyey madxafyada Galbeedka iyo ilaa maanta macallimiintu waxay sii wadaan inay isla taariikhda ku dhigtaan degitaan walaalaheyga yar, kuwaa oo iyagana ku baranaya jacayl.
Ugu dambayntiina, Afrikaanka yar lobotomized ma awoodo inuu kafeefeeco kafeeka ama kafeeka lagu soosaaray guriga iyo inay dib ugu soo noqdaan si ay uga iibiyaan isaga 1000 jeer qiimaha gorgortanka.
Negro wuxuu waqtigiisa oo dhan ku qaataa à 'S'is-flageler Si aad u badan ayuu isu arkaa mid liita oo aan loo baahnayn isagoo su'aal ka keenaya midabkiisa maqaarkiisa maxaa yeelay qaabkiisa hooseeya, wuxuu dafirayaa dhaqanka waddankiisa, wuxuu la dagaallamayaa walaalihiis iyo gabdhaha siyaasad ahaan cadaw sidaas darteedna waxaa waajib ku ah inuu rumeeysto si aan caqli gal aheyn ayuu uheli karaa badbaadada isagoo qaadanaya diimaha dalka dibadiisa laga keenay ee waxyeelada u leh naftiisa.
Isagu mar dambe uma arko wax muuqda, indhihiisu waa hanuunsan yihiin, wuu hanuuniyaa, kor u qaadayaa oo ku faanaa fuliyayaasheeda, wuxuu ku dhammaadaa jacayl iyaga la gala, wuuna is dilaa si uu ugu biiro dalalkooda, wuxuu qaataa qaab nololeedkooda, wuxuu ku hadlaa luqadaha kuwa dulman iyo xitaa ku faani inuu haysto amar ka fiican kan degitaanka luqadda, xirashada iyaga oo kale.
Sheikh Anta Diop oran doona: “The Negro wuu gabyi doonaa, dhaansiin doonaa, ooyi doonaa, kuna farxi doonaa nidaamka dulmiyey isaga; Taasi waa waxa loola jeedo inay noqoto Negro wanaagsan »Fahmitaanka asalka Chao Black / Afrika !
Waxaa qoray, Allen Zafra Freethinker
Waxa kaliya oo aan raadineyno waa nafteena marwalbana waxaan ku leenahay DNA-gaan awood aan kula xiriireyno ruuxyada awoowayaasheen ama awoodooda ruuxiga ah, ee kaligood leh awooda inay ina siiso xigmad iyo xoog. nagu hanuuni jidka toosan
Sep29 08: 33